ASUS ROG Ekwentị 2: Ahịa na nnweta na Europe | Gam akporosis
ASUS ROG Ekwentị 2 kwadoro na Europe
Egwuregwu smartphones na-aga n'ihu na-enweta ọnụnọ ahịa. E nwere ọtụtụ ụdị ndị hapụworo anyị ọtụtụ ọgbọ, dịka ASUS. Onye nrụpụta gosipụtara n'oge ọkọchị a ASUS ROG ekwentị 2 na eze, ọgbọ nke abụọ nke ekwentị gị na-egwu egwu. Modeldị dị ike, nke ọtụtụ hụrụ dị ka ekwentị kachasị mma anyị nwere ike ịchọta na mpaghara ahịa a.
ASUS ROG ekwentị a bụ ekwentị na - ewepụta mmasị, na China na nchekwa ha enweela ihe ịga nke ọma, n'ikpeazụ anyị amatala mgbe ọ ga-abata na Europe, gụnyere Spain. Yabụ ndị nwere mmasị na ekwentị egwuregwu a ga-enwe ike ịzụta ihe nlele a ugbua.
Companylọ ọrụ ahụ emesịa kpughee nkọwa nke mmalite ahịa ya, nke ọtụtụ ndị na-atụ anya ogologo oge dịka anyị nwere chere a bit a okpomọkụ ịchọta ihe na nke a. Mana anyị amaraworị mgbe anyị ga-enwe ike ịzụta ekwentị a nke ika na Europe n'ozuzu, gụnyere ahịa dị ka Spain. Nke mbu, anyi hapuru gi ya nkọwa ya ka i cheta ihe ekwentị a nwere inye.
1 Nkọwapụta ASUS ROG Ekwentị 2
Nkọwapụta ASUS ROG Ekwentị 2
ASUS ROG ekwentị 2 bụ otu n'ime ekwentị kachasị ike na anyị nọ n'ahịa. Yabụ na ọ bụ ezigbo ihe egwu iji egwu. Nzube ya zuru oke maka ngwaọrụ nke ụdị a, yana njirimara teknụzụ ya. Site na nhọrọ nke ihe nhazi ahụ, ihuenyo ya na ọnụego ume ọhụrụ ya, batrị ya buru ibu ma ọ bụ sistemụ jụrụ oyi dị ugbu a. Ndị a bụ nkọwa ya zuru ezu:
Ihuenyo: 6.6-anụ ọhịa AMOLED site na Mkpebi: 2340 x 1080 pikselụ, 120 Hz nwetaghachi ume na 19: 9 ruru
Nhazi: Qualcomm Snapdragon 855 tinyere
Nchekwa ime: 512 GB
Igwefoto na-aga n'ihu: 48 MP + 13 MP obosara nke nwere eriri Flash
Igwe n'ihu: 24 MP
Njikọ: 4G / LTE, Bluetooth 5, WiFi 802.11a / b / g / n / ac / ad, NFC, 3.5mm jaak, USB-C
ndị ọzọ: On-ihuenyo akara mkpisiaka ihe mmetụta
Batrị: 6000 mAh na ngwa ngwa nke 30W.
Akụkụ: 170.99 x 77.6 x 9.48 mm.
Ibu ibu: 240 grams
Sistemụ arụmọrụ: Configurable gam akporo
Dịka ị pụrụ ịhụ, egosiri ya dị ka ekwentị dị ike, yana ezigbo mma, ezigbo nkọwa yana nke na-ezute ihe niile ndị ọrụ na-achọ na ekwentị ịgba egwu. N'ihi ya, ọ bụghị ihe ọhụrụ ọtụtụ na-ahụ nke a ASUS ROG ekwentị 2 dị ka nhọrọ kachasị mma anyị nwere ike ịzụta taa na mpaghara ahịa a. Ọ na-agbaso ya kpamkpam ma ọ bụ ya mere atụmanya ahụ tupu ịmalite ya na ahịa kachasị.
Ndị nwere mmasị na ekwentị nwere ike idobere ya na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ahụ. Ọ dịla na ụlọ ahịa ịntanetị gị, a njikọ. Maka mmalite ya, anyị ga-echere izu ole na ole, ebe ọ bụ na anaghị atụ anya ASUS ROG ekwentị 2 malite na Europe ruo Septemba 20. Yabụ, anyị nwere obere ichere, ma ọ dịkarịa ala, anyị nwere ụbọchị ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ. A na-ahapụ ya n'otu nhazi gaa n'ahịa, dịka ị pụrụ ịhụ.
ASUS ROG ekwentị 2 biara na ego nke 899 euro na ụlọ ahịa. Ọ bụ ọnụahịa a ga-atụrịrịrịrịrị anya, yabụ na ọ gaghị eju onye ọ bụla anya na nke a. Na mgbakwunye na weebụsaịtị ya, a ga-ebupụta ya n'ụlọ ahịa yana. Ọ bụ naanị ụdị nke anyị nwere ike ịzụta maka ugbu a maka ekwentị egwuregwu ọhụrụ a nke ika ahụ, n'agbanyeghị na akwadoro ya na n'oge na-adịghị anya, a ga-enwe mbipụta pụrụ iche, nke nwekwara ike zụta na Europe na ọkwa.
A ga-akpọ ụdị nke ekwentị a Ultimate Edition, na-atụ anya na njedebe nke afọ a, ọ bụ ezie na ọ nweghị ụbọchị a kapịrị ọnụ n'oge a. Ọ ga-abịa na nchekwa 1 TB n'okwu a ma ọ ga-enye anyị ọsọ ọsọ ọsọ 20 4G LTE ọsọ ọsọ n'okwu a, rue 2Gbps. N'ihi ya, ọ ga-abụ ihe dị ike version karịa nke mbụ, ọ bụ ezie na ọ dịghị ihe a maara banyere kwuru igba egbe otú anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » ASUS ROG Ekwentị 2 kwadoro na Europe
Android 10 na-eme ka ihuenyo ụlọ ụfọdụ na Pixels ka ifriizi
10 smartphones dị ike nke August 2019, dị ka AnTuTu si kwuo